WTO ၏ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြား | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » WTO ၏ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြား » အထွေထွေ
WTO ၏ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြား
Mon, 11/22/2021 - 11:45 -- journal_editor
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ၌ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအပေါ် အထူးနှင့်သီးခြားသက်သာခွင့် များ ပေးအပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မှုများမှာ သင့်တင့်မျှတမှု မရှိသည့် အားလျော်စွာ WTO အနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အိန္ဒိယ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က ပြောကြားလိုက်သည်။
၁၈-၁၁-၂၀၂၁ နေ့၌ နယူး‌ဒေလီမြို့တွင် အိန္ဒိယစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (CII) ကစီစဉ်ကျင်းပသည့် CII Global Economic Policy Summit ၏ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ရာတွင် ဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က၎င်းအနေဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်WTO ၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများမှာ မျှတမှုမရှိဟုရှုမြင်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အား ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံသို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအဖြစ် စဉ်းစားရမည့် ဆွေးနွေးမှုများကို နားလည်နိုင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင်လူတစ်ဦးကျဝင်ငွေဒေါ်လာ ၆၀၀ မှ ၃၀၀၀ အကြားသာရှိသော နိုင်ငံများ အား တစ်ဦးကျဝင်ငွေဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀ မှ ၈၀၀၀၀ အထိမြင့်မားသော နိုင်ငံများနှင့်တစ်တန်း တည်းထားလျက် အချို့သော သီးခြားသက်သာမှုအခွင့်အရေးများ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ပိတ်ပင်မှုဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလေ့အထများသည်လွန်စွာ တရားမျှတမှုမရှိသည့်ကိစ္စပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အချို့သောနိုင်ငံများအနေဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့်မျှတမှုရှိစွာဖြင့် အစစ်အမှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိကို ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးသည် ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်နည်းပညာရပ်များ ပံ့ပိုးခြင်းကဲ့သို့သော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (SDGs) နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များသို့ ရောက်ရှိရေး၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်ပိုမိုအလေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၌ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား အချို့သော အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိစေမည့်အထူးနှင့်သီးခြားသက်သာခွင့်ပေးအပ်မှုအစီအမံများ ပြဌာန်း ထားရှိရာ ၎င်းခံစားခွင့်များ၌ အကျုံးဝင်ရန်အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဆို၎င်းအား ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအဖြစ်အဆိုပြုသတ်မှတ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင်အမေရိကန်နိုင်ငံကထိုကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ကြေညာခြင်းသည်WTO ၏ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ကိုကျရှုံးမှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိစေပြီး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆီလျော်မှုမရှိကြောင်း အဆိုပြုထားပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကမူအဆိုပါ ကိစ္စရပ်အား WTO ၌ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်အထူးနှင့်သီးခြားသက်သာခွင့်များ ပေးအပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများစုဆန္ဒသဘောထားနှင့်ကိုက်ညီသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရယူဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အဆိုပြုထားပါသည်။
Source: 1. Unfair to link WTO reforms with S&DT, says Piyush Goyal, 19-11-2021, Economic Times
2. “WTO needs to reassess the way it has been conducting its affairs”, says Shri Piyush Goyal, 18-11-2021, Press Information Bureau of India